Somaliya oo wali ka Walaacsan Xaaladda Qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya – Radio Daljir
Abriil 18, 2015 2:46 b 0
Sabti, Abriil 18, 2015 (Daljir) —Ugu horeynta, dawladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa Dawladda Kenya oo tan iyo sanadkii 1991-dii magangelyo siinaysay qaxootiga isdaba-jooga ahaa ee ka soo cararayey dagaaladii sokeeye iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee ka dhacaya Soomaaliya, mahad taas la mid ah waxaanu u jeedinaynaa deeq bixiyayaasha caalamka ee mudadaas dheer quudinayey ama daryeelayey qaxootigaas tirada badan.
Mahaddaas ka dib, sida ay qabaan shuruucda caalamiga ah iyo tan dareenka bini’aadamka xorta ahba, masuuliyadii Dawladda Kenya iyo beesha caalamka ka saarneyd nabadgelyada iyo daryeelka qaxootiga Soomaaliyeed weli way taagan tahay, maadaama colaadii iyo deganaasho la’aantii dhulkoodii weli si buuxda wax isaga bedelin.
Inkasta oo la dagaalanka argagixisadu wax weyn ka bedelay dareenkii isjeceylka bini’aadamka ee aduunka, hadana waxaa lama huraan ah in dawladaha iyo dadyowga aduunka yeeshaan samir, dulqaad iyo awood ay ku kala saaraan denbiilaha iyo dulmanaha.
Dawladda Soomaaliyeed waxay helaysaa warbixino naxdin leh oo la xiriira xaaladda dhinacyada amniga, nolosha qoyska iyo daryeelka caafimaadka ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka kenya.
Sida la ogyahay, UNHCR waxay sanadihii dambe dhintay cuntadii iyo daryeelkii ay siin jirtay Qaxootiga dhadhaab, sidoo kalena la dagaalanka Alshabaab iyo argagixisadu wuxuu xeryaha qaxootiga ka xidhay dhamaan iridihii naxariista bini’aadamka, ka dib markii la joojisay deeqdo ay qaxootigu mar mar ka heli jireen hay’ado iyo shaqsiyaad ka socda dunida Islaamka, iyo ugu dambeyntii shilimaadkii ay dhinaca xawilaada ugu soo diri jireen eheladoodu.
Sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno Soomaalida ku nool xeryaha Qaxootiga dhadhaab iyo qaxootiga kale ee ku firirsan magaalooyinka Kenya, waxaa jirta cabsi iyo baahi xoog leh oo haysata qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Kenya, ka dib markii duruufaha jiraa xadideen in ay si xor ah u dhaqdhaqaaqaan oo u raadsadaan noloshooda oo markii horeba cidhiidhi ku jirtey.
Anagoo ka xun dhamaan ficiladda argagixisadda ee ka dhanka ah nabada iyo xasiloonida Kenya, geeska Africa iyo guud ahaan caalamka. Ayaanu ugu baaqaynaa dawladda Kenya:-
• In ay xakamayso cadhada dawladda iyo dadka Kenya ka qaadeen weerarkii argaxisadda ee Mandheera oo ogaato in Alshabaab yihiin cadowga nolosha iyo nabada ee Soomaaliya iyo Kenya.
• In la xoojiyo awooda iyo wada shaqeynta sirdoonka labada dal ee deriska iyo walaalaha ah, isla markaasna laga dhex abuuro labada shacab mutadawiciin la shaqeeya booliska (community policing), si loo qabqabto denbiilayaasha, gacmaha hay’adaha amnigana looga ilaaliyo in ay ciqaabaan dad aan waxba galabsan.
• In ay dib u furto shirkadaha Xawaaladaha oo soo geliya Kenya dhaqaale fara badan, isla markaana ay ku tiirsan tahay nolosha qosas aad u fara badan oo ah Kenyan iyo qaxooti Soomaali ah.
• In arinta dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed loo maro qorshihii sadex geesoodka ahaa ee ay isla wadeen labada dawladood iyo UNHCR.
Dawladda Soomaaliyeed waxay dardargelinaysaa dabar-goynta alshabaab iyo dib u xoreynta degmooyinka yar ee ku harsan gacantooda, waxayna ugu baaqaysaa dawladaha gobolka in ay nala galaan dagaal lagu soo afjarayo jiritaan Alshaab iyo Alqaacidada Beriga Africa.